I-OnePlus 6 iya kuba nomva owenziwe ngeglasi | I-Androidsis
Iqinisekisiwe: I-OnePlus 6 iya kubuya iglasi
I-OnePlus 6 yenye yezona fowuni zithethwa kakhulu kule ntwasahlobo. Ngethamsanqa, kubonakala ngathi kuya kuba kuncinci kakhulu ukulinda de isixhobo sinikezelwe ngokusemthethweni. Kancinci kancinci sele sifunde ezinye iinkcukacha malunga nomnxeba, njengobukho benotshi. Ngoku, sinolwazi oluthe kratya kuyilo, kwakhona enkosi kwi-CEO yenkampani.
Ukusukela ukuba umphathi wenkampani yaseTshayina ngokwakhe ulayishe umfanekiso ongasemva kwale OnePlus 6. Enkosi ngayo, inkcukacha sele iqinisekisiwe. Kwaye ifowuni izakubuya ngeglasi. Iinkcukacha eziye zanemfashini kuluhlu oluphezulu.
Ukongeza, sinenkcazo esixelela izizathu zokuba kutheni inkampani ikhethile ukugqiba. Ukusukela ukubheja emzimbeni weglasi sisigqibo esibalulekileyo. Into abayaziyo kwinkampani uqobo. Kodwa oku kwenzelwe ukunika ipremiyamu ukuziva kubasebenzisi abathenga le OnePlus 6 kungekudala.
Baye baxoxa ngezinye zeenzuzo zeglasi ngaphezulu kwesinyithi. Kuba iglasi inxibelelana nolwazelelo lokukhanya, ubunyulu kunye nokuqaqamba. Into abafuna ukuyidlulisa ngeziphelo eziphezulu xa ihlasela ezivenkileni. Ngapha koko, le nkqubo khange ibelula.
Ukusukela ngaphezulu kweeprototypes zeglasi ezingama-70 zavavanywa de kwabekwa enye eyinxalenye yale OnePlus 6. Ukongeza, baqinisekisile ukuba kusetyenziswa iileya ezi-5 zokwaleka kwe-nanotechnological. Isiqhelo sihlala si-3, ubuncinci okwenziwa ngabakhuphisana nabo. Ngale ndlela, isixhobo sinobunzulu obukhulu bokufumaneka.
Okwangoku akusekho nto ibekiweyo kuyilo lweglasi yale OnePlus 6. Kuba khange bathethe ngokuchasa, ngumba ophambili kwezi ntlobo zezixhobo. Ngaphandle kokuba yinto ekhathaza abasebenzisi kakhulu. Ke kuya kufuneka sinikele ingqalelo kwiindaba ezininzi malunga nesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Iqinisekisiwe: I-OnePlus 6 iya kubuya iglasi
Ukucoca uyilo olupheleleyo lwe-LG G7 ThinQ
UAsus ZenFone Max Pro M1, udidi olutsha lwezoqoqosho oluphakathi kweTaiwan